Ugcino-zincwadi, uphicotho, iirhafu | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: I-Accounting, i-Audit, iRhafu
Ndixelele, nceda, yintoni umehluko phakathi kwesenzo, invoyisi kunye nevoyisi?
Ungandixelela ukuba yintoni umahluko phakathi kwesenzo, i-invoyisi kunye ne-invoyisi? Inkosazana iphendule kakuhle kunazo zonke, kodwa malunga nephepha langasese - libukhali kakhulu.
Yiyiphi i-royalty franchising? ngomzekelo
Yintoni ubukhosi, ukuthengisa ngokuthengisa imali? umzekelo malunga nelungelo lokuloba ngeentlanzi, ndingathanda ukufunda okungakumbi. Ndiyaqonda ukuba akukho khuphiswano lungako kweli candelo. Ngapha koko, akukho khuphiswano lungako. ...
Khawundixelele, nceda, uya kuba yintoni ukuthunyelwa kwirekhodi engaphambili
Nceda undixelele ukuba izakuba yintoni izithuba ezithunyelweyo kwingxelo kwangaphambili D71 K51 - imali yakhutshwa kwiakhawunti D60 K71 - iimpahla (okanye izinto) zahlawulwa kwitsheki D10 (44) K60 - iimpahla (izinto) zirekhodwe ...
Ukutshintshwa kobunini bempahla kumthengi
Ukugqithisela ubunini beempahla kumthengi Injongo yokuqukumbela nayiphi na intengiselwano kwintengiso yepropathi kukufumana ubunini kunye nokukwazi ukulahla le propati. Ngaba umthengi uwafumana nini amalungelo obunini? ...
Kude kube nini emva kokufakwa kwentela yokubuyiswa kweerhafu?
Ude kube nini emva kokugcwalisa irhafu yokubuyisa irhafu? Amaxwebhu okuncitshiswa kwerhafu angeniswa kwiikopi ezi-2. Ikopi enye kwiofisi yerhafu, kwaye eyesibini ihleli nawe ngenqaku malunga nokungenayo. ...
iifom zophicotho. Iifom zophicotho zenza ntoni, zithini imisebenzi yazo?
iifemu zophicotho-zincwadi. Zenza ntoni iifemu zophicotho-zincwadi, yintoni imisebenzi yazo? http://akfpartner.ru/auditorskie-uslugi Kukho indawo enye enomdla kakhulu apho unokufumana impendulo kumbuzo wakho onomdla ... Kule ndawo unga ...
Umbuzo wokuphendula ingxelo uchaza ixabiso lokuposa elilula
umbuzo kwi-accounting, cacisa ixabiso lokuposa ngolwimi olulula 1) Dt 62.02 Kt 62.01 - kwi-62.02 yeentlawulo zangaphambili (ukuqhubela phambili) kuthathelwa ingqalelo, kwaye ngo-62.01 - ezifumanekayo zomthengi. Olu cingo lwenziwa ...
Ihlawulwa njani irhafu yomntu ngamnye? Irhafu ibalwa phi, nini ukuhlawulwa?
Ihlawulwa njani irhafu yomntu ngamnye? Irhafu ibalwa njani, ihlawulwa nini? Njengaye wonke umntu, kubalulekile ukuba abasebenzi bagcine kwaye badlulisele kuhlahlo-lwabiwo mali ngosuku ...
Iyintoni i-akhawunti ehambelanayo? Yilula nje ulwimi lwesiRashiya.
Yintoni iakhawunti ecinyiweyo? Kuphela kwi-Russian elula. Lyudmila Dmitrievna, ucacise yonke into ngokucacileyo, enkosi! Kubuhlungu ukuba ubungenguye umyaleli wam we-boo. accounting kwiziko! Unxibelelwano ...
yinjongo yomsebenzi osomashishini. o Ukukhutshwa kwenzuzo o Ukunikezelwa kweenkonzo o Inkxaso yolwazi
yintoni injongo yeshishini. o Ukwenza ingeniso o Ukunikezelwa kweenkonzo o Inkxaso yolwazi Jonga iTshatha, kuyo yonke imibutho yorhwebo - ukwenza inzuzo, kwimibutho engeyoyorhwebo - yokuphumeza iinjongo, ...
Ngaba kufuneka ndifake isicelo se-UTII xa ubhalisa i-SP?
Ngaba kufuneka ndenze isicelo kwangoko se-UTII xa ndibhalisa usomashishini othile? Ngenisa isicelo senkqubo yerhafu eyenziwe lula kwisithuba seentsuku ezintlanu emva kokubhaliswa kwigunya lerhafu. Kwaye xa uqala umsebenzi owela ngaphakathi ...
Uluhlu lweempahla…. Ipesenti ezilikhulu zoluhlu lweempahla zezi: 3. Ukucaciswa kwepropathi kunye namatyala emali ngokuthelekisa idatha yobalo-mali ngomhla othile. IZINTO 3 "... 1,2,3,4. Ukunikeza…
inani elikhutshweyo lemali yokusebenza ngenxa yokukhawuleza kwabo, indlela yokumisela?
isixa esikhutshiweyo senkunzi yokusebenza njengesiphumo sokukhawulezisa kwabo, indlela yokuchonga? Ukuthelekiswa kwezalathisi zengeniso yokusebenza kukuvumela ukuba unqume ukukhawulezisa okanye ukunciphisa ukusebenza. Ukukhutshwa ngokupheleleyo kwenzeka xa kulonyaka ukuyo isixa sokujikeleza ...
Indlela yokujonga umphumo wezezimali ngokuthengiswa kweemveliso? D-90, K-99
ukufumanisa njani iziphumo zezemali kuthengiso lweemveliso? D-90, K-99 Umzekelo wokubonakalisa kwi-accounting nakwirhafu yentengiso yeemveliso ezigqityiweyo. Ubunini beemveliso ezidluliselwe kumthengi ngexesha lokudluliselwa kwetyala lakhe ...
ndixelele yintoni i-subconto?
Ndixelele yintoni i-subconto? Uhlalutyo. Umzekelo, iakhawunti ye-10-izinto, ekusasazeni kwi-subconto-stocks, izinto ezingafunekiyo, njl njl.I-Subconto-sisalathiso sohlalutyo esikuvumela ukuba uqonde iakhawunti ngokokungaziwa ngaphambili ...
Ufuna kangakanani ngemali ukuze uvule isikhephethi kunye nesixa sokuthenga izinto?
Ufuna malini ukuvula itafile kwaye malunga nemali yokuthenga iimpahla? Umntu endandiqhelene naye waqesha iivenkilana ezincinci eChelyabinsk. Ukuvulwa kwathatha iiruble ezingamawaka alikhulu. , nangaphezulu ...
Ndixelele, yintoni umehluko phakathi kokuthengisa kunye nokuthengisa?
Ndixelele, yintoni umahluko phakathi kwevenkile ethengisa ukutya kunye neevenkile? Kumthengi. Akukho luvo lwevenkile ethengisa ngokuthengisa emithethweni. Kukho inkcazo yokuba ukuthengisa kukuthengisa kunye nokuthengwa kwezinto ozisebenzisela zona. Ihowuliseyili kukuthengwa ngaphandle kokujolisa ekusetyenzisweni kokugqibela, nge ...
Ngaba i-NDFL ehlawulwa iholide? Njani yokwenza i-wiring? Nini ukuhlawula? Iholide kufuneka ibe kwingxelo yomvuzo okanye
Irhafu yengeniso yomntu eqokelelwe kwintlawulo yeholide? Uhlawula nini? Intlawulo yeholide kufuneka ibe kumvuzo womvuzo okanye kwirhafu yengeniso yomntu evela kwintlawulo yeholide idluliselwe ngexesha lokukhutshwa kwentlawulo yeholide, ungabhala iakhawunti yeendleko, ukuba umntu uya ...
Iyintoni intlawulo yokubonisa?
lithini ixabiso lentengiso? Ndiza kukuqonda oku xa ixabiso lingazinzanga Ixabiso elibonisayo lixabiso elingezantsi apho iimpahla zingenakuthengiswa ngexesha lokuthumela ngaphandle.Amaxabiso abonakalisiweyo athetha amaxabiso ...
Sawubona! Ndifuna ukwazi ukuba yintoni umthwalo we-calculator accountant kwindawo yokutyela, yimiphi imisebenzi endiyenzayo?
Molo! Ndifuna ukwazi ukuba luyintoni uxanduva lwesibali-mali sokubala kwindawo yokutyela, yeyiphi imisebenzi ekufuneka siyenzile? Zoba amakhadi obalo eemveliso ezilungisiweyo nezithengisiweyo. Lishishini elinzima nelintsonkothileyo. Kuyinyani, ngoku kukho ezizodwa ...
Page 1 Page 2 ... Page 29 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-40,402.